Tenisy – « La Réunion »: tsara toerana Rakotoarilala Randy | NewsMada
Tenisy – « La Réunion »: tsara toerana Rakotoarilala Randy
Miditra amin’ny andro faha-4 amin’izao, ny dingana voalohany, amin’ilay fifaninana tanterahina any La Réunion, taranja tenisy. Tafakatra amin’ny dingana famaranana Rakotoarilala Randy, hifaninana amin’ny manasa-dalana kosa Rakotomalala Mahefa.
Mitohy hatrany ny fahombiazana ho an’ireo solontena malagasy, miatrika ny lalao iraisam-pirenena any amin’ny Nosy La Réunion, eo amin’ny sokajy latsaky ny 14 taona. Fifaninanana izay nanomboka ny 11 marsa lasa teo ary hifarana ny 24 marsa izao. Ny faran’ity herinandro ity no hikatona ny dingana voalohany ary mbola hiatrika ny dingana faharoa kosa ireo mpilalao, manomboka amin’iny herinandro ho avy iny. Manararaotra mampitombo isa mba hahafahana miatrika ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika avokoa ireo atleta rehetra mandray anjara amin’ny fifaninanana toy izao. Mahakasika izay indrindra, efa tsara toerana amin’izao ny solontena malagasy, Rakotoarilala Randy, tsy mitsahatra ny mibata fandresena. Tafakatra amin’ny lalao famaranana ity farany, rehefa avy nifandona tamin’ilay teratany renioney, i Tanguy Carla. Nandritra io lalao manasa-dalana io no nandavoin’i Randy ny mpifanandrina taminy, tamin’ny seta 2 no ho 0 (6/4 7/5). Araka izany, hiatrika ny lalao famaranana, ao anatin’ny dingana voalohany, ity mpilalao malagasy ity, rahampitso sabotsy.
Tetsy ankilany, mihamiakatra ihany koa ny vintana amin’ny mety hiatrehan-dRakotomalala Mahefa ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika satria nahomby ny teknika ka tafakatra amin’ny dingana manasa-dalana, teo amin’ny sokajy lehilahy, ity tovolahy ity. Nolavoiny tamin’ny seta 2 no ho 0 (6/3 6/2), ny mpifanandrina taminy, i Frechet, teratany renioney. Ny teratany sinoa, antsoina hoe Zhang kosa no miandry an’i Mahefa amin’ny lalao manasa-dalana, tanterahina, anio.